Dayot Upamecano ma’ahan kaliya ciyaaryahanka ka tirsan Kooxda RB Leipzig ee diiradda u saaran Manchester United – Gool FM
(Manchester) 24 Nof 2020. Sida wararku ay tilmaamayaan Dayot Upamecano ma’ahan kaliya ciyaaryahanka ka tirsan Kooxda kubadda cagta RB Leipzig ee ay doonayso saxiixiisa naadiga Manchester United.
Dayot Upamecano ayaa weli la la xiriirinayaa Kooxda Manchester United, iyadoo sidaas oo kale daafacan reer France ay xiiseynayaan Kooxo dhowr ah oo ka ciyaaraya tartanka Champions League.
Si kastaba ha noqotee, waxa ay u muuqataa in daafacan dhexe uusan kaliya ahayn xubin ka tirsan shaxda Kooxda RB Leipzig ee soo jiitay xiisaha kooxda ka arrimisa garoonka Old Trafford.
Sida laga soo xigtay khabiirka ahna weeraryahankii hore ee horyaalka Premier League Jan Aage Fjortoft ayaa isagoo u warramayey MEN Sport waxa uu shaaca ka qaaday in Manchester United ay sidoo kale doonayso Marcel Sabitzer haddii xiddiga khadka dhexe ee reer Austria uu yahay mid la heli karo.
Sabitzer ayaa ka soo kacay kursiga keydka iyadoo Leipzig 5-0 looga badiyay kulankii ka dhacay garoonka Old Trafford horraantii xilli ciyaareedkaan, waxaana uu dhaliyay labo gool kulankii ay kooxdiisu Champions League ka reebtay Tottenham xilli ciyaareedkii hore.
26-sano jirkaan ayaa sidoo kale dhaliyay goolkiisii siddeedaad ee qaranka waa weyn kulankii ay bishii Sebtember ka badiyeen Norway, kaasoo ka tirsanaa tartanka UEFA Nations League.
Taageerayaasha kubadda cagta oo garoommada ku soo laabanaya... (Goorta & Tirada loo ogolaan doono oo la sii ogaaday)